Dulucda, Aragtida iyo Doqon Wadaagga | Martech Zone
Khamiis, May 10, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Intii aan ku socday wadada weyn, waxaan u maleynayaa inaysan wax yar ka aheyn mucjiso aan ka dhigo inay ku shaqeyso nolol iyo (ku dhowaad) waqtigeeda. Waxaan u maleynayaa inaysan aheyn wax mucjiso ah maxaa yeelay markaan la shaqeynin dad caqli badan, waxaan aqriyaa waxyaabo badan oo nacasnimo ah oo ku saabsan Twitter iyo Facebook… iyo daawashada waxyaabo nacasnimo ah oo badan oo telefishanka ah. Hadday dadku baabuurtooda u kaxeeyaan sida ay u wadaagaan macluumaadka, waxaan u maleynayaa celcelis ahaan cimriga wadista wadista inay noqon doonto ilaa 72 ilbiriqsi.
Inta badan xogta aan faafino waa doqon.
Maalintii kale ayaan sameeyay. Waxaan u diray emayl saaxiib wanaagsan iyo suuq ixtiraam leh Jascha Kaykas-Wolff at Mindjet isagoo tilmaamaya xoogaa xog cusub ah oo sheegay in Akhristayaasha bulshada ee Facebook way burburayeen oo gubanayeen. Dabcan, fiirin yar oo qoto dheer ayaa lagu ogaaday in aqrintu hoos u dhacdo, laakiin hawlgelinta waa ilaa. Ugu dambeyntiina, waxay umuuqataa in arrintu ay noqon karto uun in si liidata loo hirgeliyey akhristayaasha bulshada ay dhimanayaan, laakiin waxyaabo aad u fiican ayaa sifiican u socda. Jascha, mahadsanid, dib ayey u soo celisay maqaalkaas.
Markaad baabuur waddo, waa wax lala yaabo dhammaan waxyaabaha aan sameyno si aan u gaarno halka aan u socono. Waan ognahay halka laga bilaabayo iyo meesha aan ku dhammeyneyno, waxaan la soconaa horumarka horay u socda, waxaan si jadwal ah u jaleecnaa muraayadayada dambe, waxaan ka hubinaa muraayadaha dhinaca xitaa waxaan raadineynaa goobteena indhoolaha ah marba mar. Waxaan ku haynaa laba gacmood isteerinka, cag marinka bareega ama gaaska… iyo mararka qaar mid kale oo xajin ah. Ma fiicnaan laheyd haddii aan noqon lahayn kuwa taxaddar badan, taxaddar leh, wax is weydiiya oo wax ka jawaaba marka aan adeegsanno macluumaadka aan ka ogaanno internetka?
Maya Ma nihin Waxaan aragnaa wax daneynaya xiisaha aan u leenahay - si kasta oo doqon loo yahay - oo aan u gudbinno. Dib ufiiri. La wadaag Sida. +1. Woohoo!
Wax aan ka yareyn hal mar usbuucii, waxaan raadinayaa wax aad u wanaagsan oo aan run ku noqon karo oo ku saabsan Snopes oo aan dib ugu soo celinayo qofka shakhsiga uu u qaybinaayo aysan run ahayn sida ugu yar (waan ka xumahay Aabbe!). Markay dadku rabaan inay rumaystaan ​​waxa ku jira cutub qoraal ah, qaniinyo cod ah, ama fiidiyoow ah - weligood wax yar oo qoto dheer ma qodanayaan, way ku dhajistaan, ku dhajiyaan, ama emayl ugu diraan dhammaan asxaabtooda. Nacasnimada waxaa loo qaybin karaa si wax ku ool ah macluumaadka si ka sarreeya wax kasta oo qiimo leh.
Taleefishinka dhabta ah waa tiirarka tan. Hadaadan waligaa arkin Charlie Brooker muuji sida dhabta ah ee wax soo saarka telefishanka u shaqeeyo, waa wax lala yaabo (oo laga naxo):
Telefishinka dhabta ah wuxuu la mid yahay sida aan si cillad la’aan ah ula wadaagno macluumaadka. Waan iska jarnaa, koobiyeynnaa, dhejinnaa oo daabicinnaa. Wadaagista waa mid aad u fudud.
Xitaa internetka, waxaad ka akhrinaysaa sheeko khiyaali ah oo la soo saaray iyada oo la adeegsanayo qoraallada dhabta ah ee qoraalka, maqalka iyo muuqaalka. Ku sameynta falanqeyn qotodheer akhristayaasha bulshada ee Facebook waa tusaale weyn. Maqaalka asalka ah waxaa laga yaabaa inuusan si ula kac ah u marin habaabin dadka… laakiin waxay ku dhaceen muunad xog ah oo muujineysa macluumaad xoog leh. Way fududahay in sheekada lagu qoro garaafka. Nasiib wanaagse, kuwa kale ayaa qoday wax yar oo qoto dheer waxayna aqoonsadeen natiijooyin muhiim ah oo ka baxsan sheekada asalka ah. Taasi badanaa ma dhacdo in ku filan, in kastoo.
Waxaan ku aragnaa isla khaladaadkan maalin kasta suuqleyda. Waxay dayacaan inay eegaan bidix, midig, gadaal… mana garanayaan meesha ay joogeen, ama dhag jalaq uma siinayaan halka ay aadayaan. Haddii aad kaliya diiradda saareyso halka ay ku yaalliin, waad u oggolaan kartaa god daloolo inuu hor istaago dadaalladaada oo dhan maxaa yeelay waad ka weecaneysaa. Waxa u muuqda dariiq xun ayaa noqon kara xalka aad u baahan tahay inaad ka gudubto.
Dabcan, waxaan u aragnaa inay ka sii liidato siyaasadda. Xayeysiis kasta oo siyaasadeed waa dhawaaq dhawaaq laga saaray macnaha guud loona yareeyay boos xoogaa ah oo fudud oo la yasayo. Siyaasiyiintu waxay ku tiirsan yihiin tafatirka weyn. Waa ayaan darro. Dhagaystayaashoodu waxbadan ayey mudan yihiin.
Adduunyada jeexjeexyada, shaashadaha shaashadda iyo dhawaqa sound aad bay uga sahlan tahay in doqonnimada loo gudbiyo marka loo eego caqliga. Waa shaqadaada aqriste (xitaa boggan) inaad si qoto dheer u eegto. Waa shaqadayda iyo masuuliyaddayda sida blogger-ka inaan u fiirsado tilmaamaha oo dhan ka hor intaanan kugu dhiirrigelin inaad ka gudubto gaaska ama jejebiinta iyo leexashada. Saxafiyiinta, bloggers-yada, xarumaha warbaahinta iyo xitaa falanqeeyayaasha fikradaha qaba waxay ubaahanyihiin in ay helaan waxyaabo badan oo caqabad ku ah oo ay bilaabaan adeegsiga dhamaan kulliyadahooda si ay si buuxda ugu wargaliyaan dadweynaha.
Kaliya rajo kama qabo inay jiraan waxyaabo badan oo hareeraha ka jira oo kara ama diyaar u ah inay taas gaaraan. Doqonka ayaa la wadaaga wax badan ka fudud. Ha i aaminin? Isku day inaad la wadaagto qoraal si taxaddar leh loo qoray, oo caqli badan Kadib dhaji sawir bisad qosol badan. Kee baa si fiican u qabtay?
Tags: Macnaha guudnacasnimoaragti
Fiidiyow: Hagaha Suuqa ee Pinterest
May 24, 2012 at 10: 19 AM
Douglas, waan ka helay qoraalkan. Waxyaabihii aan hore uga akhriyey ee ku saabsan Twitter-ka waxay ahayd inaan hubiyo xiriiriye kasta oo aad soo dirto ama aad soo gudbiso halkii aan si indho la'aan ah dib ugu soo celin lahaa maxaa yeelay waxay leedahay mowduuc soo jiidasho leh oo ku saabsan 140 xaraf. Mar waxaan u maleeyaa laba jeer oo aan faafreeyaa qoraalkeyga oo aan ku dhajinayaa inaanan dhajin, haddii ay la wadaagayaan wax quasi-bland ah. Waxaan kaloo layaabay sida ay dadku ugu maleynayaan inay qiimo ku kordhinayaan iyaga oo u diraya e-maylkooda siyaasad / diin / anshax eex ama ku dhajinaya Facebook. Waxaan hayaa saaxiib hore oo ah nacayb dhab ah wuuna yaaban yahay sababta aanan ugu jawaabin e-maylkiisa. Runtu waxa weeye, emaylkiisa ayaa tagaya galka fayladayda oo waxaan ka hubiyaa e-mayl isaga ka imanaya qiyaastii rubuc mar, anigoo u jawaabaya laba kaftan ama sawirro ah inantiisa ayeeyada ah stuff kaliya waxyaabaha aan weerarka ahayn. Tan iyo markii aan fiiqayna, ma rumaysan karo inaan wali u hayo "dad badan x-dad badan" nasiib wacan (ama aan uga badbaado habaar 10 fac ah!) Emaylka saaxiibkayga ama laba qaali ah, inkasta oo aan u sheegay inaan ahay aad ugu mashquulsan waxyaabaha noocaas ah. Waa tan e-mayl kale oo dhawaanahan ka imanayay hal saaxiib oo si fiican u damacsan…
MADAXWEYNAHA: Fw: MUHIIM in la ogaado
Qof walba fadlan la soco,
Hadday duruuf ahaatoba cid baa soo wacda
Adiga oo sheegaya in aad leedahay xubin qoys oo shil xun galay iyo
waxay kuu sameynayaan wanaag markay kuu yeeraan si ay kuu ogeysiiyaan oo ay ku siiyaan
cinwaanka / goobta uu shilka ka dhacay
HA AADIN waa khiyaano.
Sida muuqata dhowr [shirkadda XYZ, geli kuwaaga] la-hawlgalayaasha
iyo xubnaha qoysaskooda waxaa durba la soo xiriiray fanaaniintan / shaqsiyaadka khiyaanada badan.
Shirkad [XYZ ah, geli taada] xubin horay u dhacday
khiyaanada oo la dhacay markii ay gaareen goobta uu ku soo wacayo.
U sii gudbi tan kuwa kale.
- Haa, waa hagaag.Ma laga yaabaa in qofkani gacantii ugu horreysay uu ku lahaa dhowr dhacdooyinkan, oo ay ku dhacday asxaabtooda shaqsiga ah? Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan ku faraxno inay jiraan dad daryeela oo igu sii dhajin kara.